"I-Closet" - eyodwa 'igumbi lokulala' - I-Airbnb
"I-Closet" - eyodwa 'igumbi lokulala'
Aberdeen, Scotland, i-United Kingdom
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Rachel
Itholakala phakathi nomgwaqo othule futhi eduze kwezitolo / izindawo zokudlela / izindawo zokucima ukoma ezimbalwa kanye nebanga lokuhamba ukusuka edolobheni, indawo yeshashalazi kanye nesibhedlela.
Empeleni uzobe ulala ekhabetheni lami lephaseji eliguqulwe laba yikamelo elilodwa “elinomsoco”. Nakuba ungenalo iwindi, noma ukhakhayi olunethezekile, ONAKHO indawo ethokomele yokuphumula ikhanda elikhathele, isokhethi yodonga ukuze ushaje ifoni yakho, ithawula elihlanzekile, futhi mhlawumbe nekhabethe eliwubukhazikhazi okungenzeka ube nalo. ukuba!
Nakuba ukude nje imizuzu embalwa ukusuka enkabeni yedolobha, iflethi lisemgwaqweni othule kakhulu, ohlala abantu. Wamukelekile ukusebenzisa igumbi lokuphumula, igumbi lokudlela, ingadi (uma isimo sezulu sisihle), kanye nekhishi (yize ngicela uhlanzele wena), njengoba ngingalindele neze ukuthi uzivalele ekhabetheni!
Kunendawo yedeski uma ungathanda ukusebenza, kanye nokufinyelela ku-WiFi. Yilapho engihlala khona, hhayi indawo eqashisayo ye-AirBnB ezinikele, ngakho-ke cishe ngizoba khona ngezinye izikhathi - ngijabulele ukuxoxa noma ukukushiya usebenzisa izinto zakho, futhi ngingancoma izindawo ongazibona/ozozenza phakathi nendawo kanye nokunye okukude. . :)
Uma uhlela ukupheka, sicela uqinisekise ukuthi uyaziqoqa. Kungase futhi kube usizo ukuqaphela ukuthi anginayo imicrowave, noma isiqandisi, futhi kunesikhala esilinganiselwe sefriji, ngakho amakhono e-Tetris azokumela esikhundleni esihle!
4.90 · 88 okushiwo abanye
I-Rosemount iyindawo enokuthula enezinsiza ezimbalwa (ibhula, ushizi-monger, isitolo esikhulu, amasaluni wobuhle, umenzi wesinkwa, njll.) Ngisho ukuthi, ngisho nesithombe se-graffiti siba muncu. Kukhona umgqomo obhalwe ukuthi 'Ngiyamthanda umama' kude nemigwaqo embalwa. Kukhona nepaki elikhuphuka nje egqumeni ukusuka efulethini, cishe imizuzu emi-5 ngezinyawo.
Uhlelo lwami lwezikhathi alufani, futhi ngivame ukuphuma/ngimatasa, kodwa ngijabulela ukuxoxa noma ukukushiya wedwa lapho ngisekhaya.
Hlola ezinye izinketho ezise- Aberdeen namaphethelo